သင့်ဖုန်းထဲမှာရှိပေမဲ့ သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ feauture များ | Myanmar Mobile App
Home Trending Social သင့်ဖုန်းထဲမှာရှိပေမဲ့ သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ feauture များ
သင့်ဖုန်းထဲမှာရှိပေမဲ့ သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ feauture များ
သင်ကိုင်နေတဲ့ဖုန်းမှာ ဖုန်းရဲ့ version အလိုက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ feature လေးတွေရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီ feature တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သိထားမှ အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Activate Hidden Options (Android)
Hidden Options ကို Activate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Settings ထဲက About Phone ထဲက Model Number/Build Number ကိုသွားပါ။ Build Number or Model Numberကိုနှိပ်လိုက်ပါက menu item အသစ် “Developer Options” ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ထဲဝင်ပြီး မိမိအသုံးဝင်တဲ့ အချက်များကို on ထားလို့ရပါတယ်။
ဒါလေးကလဲဖုန်းထဲမှာပါသော်လဲလူတော်တေ်ာများများကသိပ်မသုံးဖြစ်ကြပါဘူး။ သူ့ကဘယ်ချိန်မှာပေါ်မှာလဲဆိုတော့ user က camera မှာportrait နဲ့ landscape modesပြောင်းတဲ့ချိန်မှာပိုသိသာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမြင်ချင်ရင်တော့ app store ကနေ“Bubble Level”or “spirit level” ဆိုတဲ့ app လေးကို download ဆွဲပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှ သူ့ရဲ့ level ကိုသိသာထင်ရှားစွာ မြင်တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ app လေးက physical level အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း user တော်တော်များများက ဖုန်းကို ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာ တော်တော်ရှားပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကို မလွတ်တမ်းသိချင်ကြတဲ့သူတွေက များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့သူတွေအတွက်ကျတော့လဲ အဲ့ဒီအရာတွေက အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် social media တွေနဲ့ ခနတာ အဆက်သွယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Airplane Mode ကိုဖွင့်ထားနိုင်ပတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ အားလုံးနဲ့ အဆက်သွယ်ဖြတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Airplane Mode ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ Setting ထဲမှာလဲ ၀င်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ဖုန်းတွေက power key ကိုအကြာကြီးနှိပ်ထားခြင်းအားဖြင့် Airplane Mode ကိုဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းသုံးတဲ့သူတော်တော်များများက ဗွီဒီယိုတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ကြတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြပါပေမဲ့ အသံဖိုင်ချည်းပဲကို မှတ်တမ်းတင်တာက တော်တေ်ာရှားပါတယ်။ သင့်ဖုန်းကသာ iPhone ဆိုရင်တော့ Voice Memos ဆိုတဲ့ app လေးနဲ့ အသံဖိုင်ကို မှတ်တမ်းတင် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသံဖိုင်ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့ တစ်ခြား app တော်တော် များများကိုလဲ App Store မှာ ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။
သင့်ဖုန်းကသာ Android ဖုန်းဆိုရင် အသံဖိုင်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ Sony Mobile Communications က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Audio Recorder app ကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Google Translate ဆိုတဲ့ app လေးကတော့ feature တွေတော်တေ်ာစုံတဲ့ app လို့ပြောလို့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ app ကို download ဆွဲဖို့ အခကြေးငွေ ပေးစရာမလိုပါဘူး။ သူက free app ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက အင်တာနက်မရှိရင်တော့ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ Google Translate က စာသား၊ ဓာတ်ပုံနဲ့ အသံတွေကို ဘာသာပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Google Translate ကို App Store ကနေ Download ဆွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သငျကိုငျနတေဲ့ဖုနျးမှာ ဖုနျးရဲ့ version အလိုကျ လုပျဆောငျပေးနိုငျတဲ့ feature လေးတှရှေိပါတယျ။
အဲ့ဒီ feature တှရေဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို သိထားမှ အသုံးပွုနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
1. Activate Hidden Options (Android)
Hidden Options ကို Activate လုပျခငျြတယျဆိုရငျတော့ Settings ထဲက About Phone ထဲက Model Number/Build Number ကိုသှားပါ။ Build Number or Model Numberကိုနှိပျလိုကျပါက menu item အသဈ “Developer Options” ဆိုပွီးပျေါလာပါလိမျ့မယျ။ အဲ့ထဲဝငျပွီး မိမိအသုံးဝငျတဲ့ အခကျြမြားကို on ထားလို့ရပါတယျ။
2. Gyro Sensor
ဒါလေးကလဲဖုနျးထဲမှာပါသျောလဲလူတျောတျောမြားမြားကသိပျမသုံးဖွဈကွပါဘူး။ သူ့ကဘယျခြိနျမှာပျေါမှာလဲဆိုတော့ user က camera မှာportrait နဲ့ landscape modesပွောငျးတဲ့ခြိနျမှာပိုသိသာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့လိုမွငျခငျြရငျတော့ app store ကနေ“Bubble Level”or “spirit level” ဆိုတဲ့ app လေးကို download ဆှဲပေးရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါမှ သူ့ရဲ့ level ကိုသိသာထငျရှားစှာ မွငျတှရေ့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ app လေးက physical level အတိုငျးပဲအလုပျလုပျမှာ ဖွဈပါတယျ။
စမတျဖုနျး user တျောတျောမြားမြားက ဖုနျးကို ပိတျထားတယျဆိုတာ တျောတျောရှားပါတယျ။ နောကျဆုံးပျေါသတငျးတှေ၊ အကွောငျးအရာတှေ ဖွဈပကျြနတေဲ့အရာတှကေို မလှတျတမျးသိခငျြကွတဲ့သူတှကေ မြားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈခြို့သူတှအေတှကျကတြော့လဲ အဲ့ဒီအရာတှကေ အနှောကျအယှကျတှဖွေဈစနေိုငျပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ social media တှနေဲ့ ခနတာ အဆကျသှယျကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ Airplane Mode ကိုဖှငျ့ထားနိုငျပတယျ။ အဲ့ဒါဆိုရငျတော့ အားလုံးနဲ့ အဆကျသှယျဖွတျထားနိုငျပါတယျ။ Airplane Mode ကိုလုပျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဖုနျးအမြိုးအစားပျေါ မူတညျပွီး ဖှငျ့နိုငျပါတယျ။ Setting ထဲမှာလဲ ဝငျဖှငျ့လို့ရပါတယျ။ တဈခြို့ဖုနျးတှကေ power key ကိုအကွာကွီးနှိပျထားခွငျးအားဖွငျ့ Airplane Mode ကိုဖှငျ့ထားလို့ရပါတယျ။
စမတျဖုနျးသုံးတဲ့သူတျောတျောမြားမြားက ဗှီဒီယိုတှနေဲ့ မှတျတမျးတငျကွတယျ။ ဓာတျပုံတှေ ရိုကျကွပါပမေဲ့ အသံဖိုငျခညျြးပဲကို မှတျတမျးတငျတာက တျောတျောရှားပါတယျ။ သငျ့ဖုနျးကသာ iPhone ဆိုရငျတော့ Voice Memos ဆိုတဲ့ app လေးနဲ့ အသံဖိုငျကို မှတျတမျးတငျ နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အသံဖိုငျကို မှတျတမျးတငျနိုငျတဲ့ တဈခွား app တျောတျော မြားမြားကိုလဲ App Store မှာ ရှာကွညျ့လို့ရပါတယျ။
သငျ့ဖုနျးကသာ Android ဖုနျးဆိုရငျ အသံဖိုငျတှကေို မှတျတမျးတငျဖို့ Sony Mobile Communications က ထုတျလုပျထားတဲ့ Audio Recorder app ကိုလဲ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
Google Translate ဆိုတဲ့ app လေးကတော့ feature တှတေျောတျောစုံတဲ့ app လို့ပွောလို့ ရပါတယျ။ အဲ့ဒီ app ကို download ဆှဲဖို့ အခကွေးငှေ ပေးစရာမလိုပါဘူး။ သူက free app ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူက အငျတာနကျမရှိရငျတော့ အလုပျမလုပျပါဘူး။ Google Translate က စာသား၊ ဓာတျပုံနဲ့ အသံတှကေို ဘာသာပွနျပေးတာဖွဈပါတယျ။ Google Translate ကို App Store ကနေ Download ဆှဲပွီး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
Previous articleASUS ZenFone5review: mid-range ထဲမှာ ထူးခြားပါတယ်
Next articleဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချပေးတော့မယ့် XIAOMI MI 8 EE